Tatitry ny Unicef: ankizy 1,6 miliara tsy afaka nianatra nandritra ny fihibohana | NewsMada
Araka ny tatitry ny Unicef, nahatratra 1,6 miliara ireo ankizy manerana ny firenena 191 tsy afaka namonjy sekoly noho ny fepetra raisina manoloana ny fihibohana nateraky ny valanaretina Covid-19.
Fatiantoka lehibe ho an’ireo ankizy sy tanora izao fahabangana mitarazoka izao ary mila ezaka sy paikady matotra ny fanarenana indray ara-tsaina ireo ankizy vonton’ny tebitebin’aretina sy ny fitaintainana indray hiverina an-dakilasy.
90%-n’ireo mpianatra manerana izao tontolo izao no tsy afaka namonjy varavaran-tsekoly hatramin’ny voalohan’ny volana avrily. Anisan’ny mahita faisana amin’izany ny ankizivavikely satria maro amin’izy ireo ny tsy afaka hiverina intsony an-dakilasy. Aleon’ny fianakavian’izy ireo manomana ireny ankizivavikely ireny amin’ny fanambadiana na koa mampiasa azy ireo mba tsy ho vesatra ao an-tokantrano.
Voakasik’izany isika amin’ny firenena mahantra sy an-dalam-pandrosoana. Manome vahana ny fampanambadiana mialoha ny ankizivavy ka zara aza tapaka ny fianarana.
Mizaka ny tsy eran’ny aina ireo ankizivavy amin’ireo firenena manana kolontsaina mampanambady azy ireo aloha loatra ary tsy mba afaka akory misitraka ny fampianarana na dia ny ambaratonga fototra ihany aza.